Testimonials – Speedy Tuk Tuk
Izy no Emy. Vao roa herinandro lasa monja izay izy no lasa mpamily tuk tuk. Tia mamily fiara i Emy, ary mahafinaritra azy izany. Hoy izy: “Mitovy amin’ny mitondra fiara ihany ny mamily tuk tuk, izay no hitiavako azy.” Tiany ny asany satria afaka sady mahazo fahafinaretana izy no manampy ny hafa, ary mampidi-bola hoan’ny fivelomany. Tsy mahazo vola araky ny ilainay anefa izy. Amin’i Emy dia izany no olana amin’ity asa ity. Mino izy fa raha toa ka azy ilay tuk tuk dia mety hahazo vola bebe kokoa noho ny amin’izao fotoana izao izy.
Izy no Vicent. Vao iray herinandro monja izay izy no namily tuktuk. Hatreto dia mahafinaritra an’i Vicent ny asany. Tahaka ny mpamily tuk tuk sasantsasany dia tiany izany asa izany noho ny fitiavany mamily fiara. Tsy mahita antony mety tsy hitiavany ity asa ity i Vicent. Tsy azy ny tuk tuk izay entiny saingy tsy manan olana amin’izany izy.
Izy no Julio. Efa roa taona sy tapany izay izy no namily tuk tuk. Tiany ny mamily tuk tuk satria mora kokoa noho ny mitondra fiara izany. Tsy dia tian’i Julio loatra ny asa amin’ny maha mpamily tuk tuk azy kanefa tsy maintsy ataony satria mila vola izy. Hoy izy: “Tsy tiako fa teren’ny fiainana.” Tsy azy ity tuk tuk ity, ary mety hahazo vola bebe kokoa sy mety ho tiany bebe koko ny asany raha toa ka azy tuk tuk izay hoentiny.
I Frank no mpamily an’ity tuk tuk irey ity. Tsy te ho hita eo amin’ilay sary izy saingy tena tian’i Frank ny asany. Nilaza izy fa manampy hifandray amin’ny olona izany. Noho ity asa ity dia afaka mihaona sy mifanerasera amin’ny olona maro samihafa i Frank. Tsy manana zavatra izay mety tsy hitiavany ity asa amin’ny maha mpamily tuk tuk azy ity i Frank.
Aina no anaran’ity mpamily tuk tuk iray. Enim-bolana izay izy no namily tuk tuk. Tian’i Aina ny mamily tuk tuk iray ity satria mora hoentina ilay izy. Nilaza kosa i Aina fa tsy misy zavatra tsy tiany amin’ny asa amin’ny maha mpamily tuk tuk azy.
Izy no Franck. Iray taona sy efa-bolana izay izy no namily tuk tuk. Tia mamily fiara i Franck ary tiany ihany koa arak’izany ny asa amin’ny maha mpamily. Noho izany dia tian’i Franck ny asany amin’ny maha mpamily tuck tuck azy satria mitovitovy amin’ny mamily fiara ihany izany ho azy. Tsy misy zavatra tsy tian’i Franck amin’ny asany fa manampy azy hahazo fahafinaretana eo ampitadiavam-bola izany.
Izy no Alain. Sady mitondra no tompon’ity tuk tuk ity izy. Efa roa taona izao no naha mpamily tuk tuk an’i Alain. Araky ny nambarany dia maro ireo maha tsara ny asa amin’ny maha mpamily tuk tuk. Saingy ny tian’i Alain indrindra amin’ireo sy tena manosika azy hanao ity asa ity dia ny vola izay azony amin’izany asa izany.
© Copyright 2019. Speedy Tuk Tuk - All Rights Reserved